မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာ - ဝီကီပီးဒီးယား
အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူနည်းစု ကိုးကွယ်သော ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။၂၀၁၄ ခုနှစ် တရားဝင်စာရင်းများအရ လူဦးရေ၏ ၂.၃% ခန့်က ကိုးကွယ်ကြသည်ဟုဆိုကြသော်လည်းအမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှု အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူများ၏ လူဦးရေကို သန်းခေါင်စာရင်းတွင် လျော့ပေါ့တွက်ချက်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ အစ္စလာမ်ပညာရှင်များက မြန်မာနိုင်ငံ၏ မွတ်ဆလင်လူဦးရေသည် နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၆% မှ ၁၀% ခန့်အထိ ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်
မန္တလေးမြို့ရှိဗဟိုဗလီပုံ Mandalay, Myanmar
ပုဂံခေတ်အစောပိုင်း (AD 652-660) တွင် အာရပ်မွတ်စလင်ကုန်သည်များသည် သထုံနှင့် မုတ္တမကဲ့သို့သော ဆိပ်ကမ်းများသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အာရပ်မွတ်ဆလင်သင်္ဘောများသည် မဒါဂတ်စကာမှ တရုတ်ပြည်သို့ ရွက်လွှင့်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ မကြာခဏ ဝင်ထွက်သွားလာကြသည်။ အာရပ်ခရီးသွားများသည် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ အန်ဒမန်ကျွန်းများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ အေဒီ ၁၀၅၅ တွင် ပုဂံဘုရင် အနော်ရထာမင်း၏ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်မတည်ထောင်မီက တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းနှင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းရှိ မွတ်စလင်များသည် ၉ ရာစုတွင် မြန်မာနိုင်ငံဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျောက်ဖြူ၊ ဘာစိန်၊ သံလျင်၊ မုတ္တမ၊ မြိတ် အစရှိသည့် မြန်မာ့ပင်လယ်စာစခန်းများသည် ၎င်းတို့၏ အနီးနားရှိ ရှေးဦးသင်္ဘောပျက်များ၏ ဒဏ္ဍာရီမှတ်တမ်းများနှင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် မွတ်ဆလင်များသည် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အထက်ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ မောင်တောသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ မွတ်ဆလင်များ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မောင်တောသို့ ရောက်ရှိလာသည့်အချိန်သည် မသေချာလှပါ။ ဤအစောပိုင်း မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ အခြေချနေထိုင်မှုများနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်ပွားမှုကို အာရပ်၊ ပါရှန်၊ ဥရောပနှင့် တရုတ်ခရီးသွားများ ၉ ရာစုက မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဗမာမွတ်ဆလင်များသည် ဒေသခံဗမာလူမျိုးစုများနှင့် အခြေချနေထိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြသော မွတ်စလင်များ၏ သားစဉ်မြေးဆက်များဖြစ်သည်။ ကုန်သည်များ သို့မဟုတ် အခြေချနေထိုင်သူများ၊ စစ်မှုထမ်းများ၊ နှင့် စစ်သုံ့ပန်းများ၊ ဒုက္ခသည်များ၊ နှင့် ကျွန်စနစ်၏ သားကောင်များအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မွတ်စလင်များ ရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော်လည်း အစောပိုင်း မွတ်စ်လင်မ်အများအပြားသည် တော်ဝင်အကြံပေးများ၊ တော်ဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်များ၊ မြို့တော်ဝန်များနှင့် တိုင်းရင်းဆေးဆရာများအဖြစ် ရာထူးများကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်ဟု ဆိုကြသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ကျယ်ပြောလှသော မင်းတုန်းမင်းသည် ပန်သေးဟုခေါ်သော တရုတ်မွတ်စလင်များကို မြို့တော် မန္တလေးတွင် ဗလီဆောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ မန္တလေးပန်သေးများသည် ယူနန်ပြည်နယ် စူလတန်ဆူလိုင်မန်ထံမှ အလှူငွေများ တောင်းခံခဲ့သည်။ ဆူလတန်သည် ဗလီကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် သဘောတူခဲ့ပြီး၎င်း၏ ဗိုလ်မှူးကြီး Mah Too-tu ကို 1868 ခုနှစ်တွင် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည့် ဗလီသည် သမိုင်းဝင် အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
↑ Kyi (1950)
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Yegar (1972), p.2Yamankan
↑ Tun (2006), pp. 3–4
↑ Tin & Luce (1960)
↑ Tun (2008), p. 42
↑ Dr. Tin Hlaing, leader of Myanmar delegates, at the Dialogue on Interfaith Cooperation at Yogyakarta on6&7December 2004, attended by 124 delegates from different religious traditions from 13 countries including9ASEAN members, organized by the Dept. of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Dept. of Foreign Affairs and Trade of Australia, in cooperation with the Islamic Central Committee of Muhammadiyah of Singapore. Archived 18 May 2012 at the Wayback Machine. 
↑ Daw Tint Sein, "Introduction to Konbaung Dynasty, University Education Variety Journal, University Printing Press, P 75 Part4Volume 3, July 1973.
↑ The coming of Islam to Burma down to 1700 AD by Ba Shin. p.52. The Bulletin of Burma Historical Research Commission 3, 1963. He referred to (1) History of Mons (Burmese) Maung Naw, Retired Sitke, Kyakhto pp 76-82 (2) Shwemawdaw Thamaing (in Burmese) pp 81.
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Yegar (1972), p. 10
↑ (Interview with Haji U Ba Thi alias Haji Adam (born 11 October 1908)aPanthay elder who had served for many years as chairman of the Trust of 'the Panthay Mosque, on 15 October 1997.) The Emergence Of The Panthay Community At Mandalay, by Professor U Maung Maung Lay. published in the "Essays given to Than Tun on his 75th birthday" in the book, "Studies in Myanmar History" volume 1, published by Innwa Publishing House (in 1999). Than Tun Diamond Jubilee Publication Committee. 158 (A) Yogi Kyaung Road. Hlaing XI, Yangon, Myanmar.
BurmaNet News: July 16, 2001။ BurmaNet News (16 July 2001)။
Collis၊ Maurice (1936)။ Simese White။ London: Faber and Faber။
Collis၊ Maurice (1953)။ Into Hidden Burma, an Autobiography။ London: Faber။ OCLC 2914324။
Fatimi၊ Sayyid Qudratullah (1961)။ The role of China in the spread of Islam in South-East Asia (ဘွဲ့လွန်စာတမ်း)။ University of Malaya။ OCLC 58473461။
Human Rights News (July 2002)။ Crackdown on Burmese Muslims: Human Rights Watch Briefing Paper, July 2002။
Images Asia (May 1997)။ Report on the Situation for Muslims in Burma။
Kyi၊ U (1950)။ Various Notable Facts in Burmese History (ဘွဲ့လွန်စာတမ်း)။ Mandalay: Tri-pedaka Propagating Press။
Marga၊ U (1967)။ Pathein Yazawin [History of Pathein/Bassein]။ Yangon: Zwe Sarpay Press။
Minorities at Risk (10 January 2007)။ Chronology for Rohingya (Arakanese) in Burma။3March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 January 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mranʻ māʹ cvayʻ cuṃ kyamʻʺ [Myanmar Encyclopedia]။ Ranʻ Kunʻ: Forever Group။ 1999။ OCLC 61715441။ |title= လွဲမှား သို့ မပါရှိ (အကူအညီ)
Nawrattha၊ Let Ware။ Chronicles of Alaungpaya's battles။
Ozturk၊ Cem။ "Myanmar's Muslim Sideshow"၊ Asia Times Online၊ 21 October 2003။ 20 January 2022 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 October 2003။
Peletz၊ Michael G. (2009)။ Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times။ Routledge။ ISBN 9780415931601။
Sanʻʺ Chve (2005)။ Kun' bhon'alvan' [Konbaung Dynasty Royal History]။ 1–3။ Mangala ton` ññvan`, Ran` kun`: Ra praññ` Ca pe။ OCLC 63241377။
Shin၊ Ba (1961)။ Coming of Islam to Burma Down to 1700 A.D.။ New Delhi: Azad Bhavan။ OCLC 81267926။
Tin၊ Pe Maung; Luce၊ G. H. (1960)။ The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma။ Rangoon, Burma: Rangoon University Press။
Tun၊ Than (2008)။ Khet hoṅʻʺ mranʻ mā rājavaṅʻ [Bagan Culture]။ Yangon: Thiriswe Book House။
Tun၊ Than (2006)။ Pyūtve bhay' pyok' svā´´ salai [Ancient Pyu]။ Ū´´ Kyo` HanH`´´။
US Department of State (4 March 2002)။ Burma: Country Reports on Human Rights Practices, 2001။
US Department of State (15 September 2006)။ Burma—International Religious Freedom Report 2006။
Yegar၊ Moshe (1972)။ The Muslims of Burma:aStudy ofaMinority Group။ Schriftenreihe des Südasien-Instituts der Universität Heidelberg။ Wiesbaden: Harrassowitz။ ISBN 3-447-01357-5။ OCLC 185556301။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရှိ_အစ္စလာမ်ဘာသာ&oldid=733119" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၂:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။